नयाँ सङ्क्रमण र निको हुनेको सङ्ख्या उस्तै, उपत्यकामा ३५० नयाँ सङ्क्रमित थपियो -
नयाँ सङ्क्रमण र निको हुनेको सङ्ख्या उस्तै, उपत्यकामा ३५० नयाँ सङ्क्रमित थपियो
१७ भाद्र २०७७, बुधबार १८:२८ । काठमाडाैं
विगत २४ घण्टामा एक हजार १ सय २० जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमित मध्ये ३ सय ८८ जना उपत्यकामा हुन् । जसअनुसार काठमाडौंमा ३५०, भक्तपुरमा नौ र ललितपुरमा २९ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
आज देखिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्याको तुलनामा निको हुनेको सङ्ख्या आठ जनाले बढी छ । आज एक हजार १ सय १२ जना निको भएर घर फर्केका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा ३ सय २० महिला र ८ सय जना पुरुषमा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको जानकारी दिए । अहिलेसम्म नेपालमा ४१ हजार ६ सय ४९ जनामा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएको छ । मङ्लबार एक हजार ६९ जना आज भन्दा २४ जना कम सङ्क्रमित थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले विगत २४ घण्टामा एक हजार १ सय १२ जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी दिएका छन् । जसअनुसार अहिलेसम्म २३ हजार २ सय ९० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । मङ्गलबार ७ सय ६८ जना निको भएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश-१ मा एक हजार ७ सय ८७ जना, प्रदेश-२ मा ६ हजार ३४, वाग्मती एक हजार ५ सय ६९, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार ७ सय ९, प्रदेश-५ मा पाँच हजार ६६, कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार १ सय ३७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ हजार ९ सय ८८ जना निको भएर घर फर्केका छन् । डा. गौतमले अहिलेसम्म १२ जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको जानकारी दिए । जसअनुसार मोरङ, सुनसरी, बारा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, चितवन, काठमाडाैं, ललितपुर र रुपन्देही जिल्ला रहेका छन् ।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार पाँच जिल्ला सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् । जसमा सोलुखुम्बु, मुस्ताग, भोजपुर, ताप्लेजुङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन् । यस्तै डा. गौतमले सङ्क्रमित देखिएकामध्ये १ सय ४४ जना सघन कक्षमा र १८ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको पनि पत्रकार सम्मेलनको क्रममा जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी उनको अनुसार प्रदेस-१ मा सात, प्रदेश-२ मा ३०, वाग्मती प्रदेशमा ६१, गण्डकी प्रदेशमा ६ र प्रदेश-५ मा २० जना सघन कक्षमा उपचाररत छन् भने प्रदेश-१ मा एक, वाग्मती प्रदेशमा १४ र प्रदेश-५ मा ३ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । संस्थागत आइसोलेसनमा १० हजार ४ सय ९३ र होम आइसोसनमा ७ हजार ६ सय १५ जना रहेका छन् । मन्त्रालयकै अनुसार सक्रिय सङ्क्रमित १८ हजार १ सय ८ जना र क्यारन्टिनमा छ हजार ७ सय ६६ जना छन् ।